နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရွေးချယ်မှု: 'Mersin Metro မူရင်းလုပ်ငန်းခွင် Next ကိုခြေလှမ်းများခုနှစ်တွင်' - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရွေးချယ်မှု: 'Mersin Metro မူရင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် Next ကိုခြေလှမ်းများ' '
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံအစည်းအဝေးစက်တင်ဘာလ 1 ။ "မြေအောက်အလင်းရထားစနစ်, ထို့နောက်အဓိကအလုပ်အတွက်ပါ" ဟုသူကဆိုသည်လိုက်ပြီး Select တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဥက္ကဌ Hemant ပေါင်းစပ်မှာစကားပြောသော
အဲဒီစနစ်နှင့်အတူဤပြဿနာအပေါ်မကြာသေးမီက "နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြစ်လက်ခံရရှိသောစနစ်၏တရားသဖြင့်စီရင်တှငျတှေ့ Mersin မြေအောက်အလင်းရထားကို select ဌာနမှူးအတွက်ရှေ့ဆက်မြေအောက်အလင်းရထားမစ္စတာကြည့်ရှုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ 2019 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်။ ဤသည်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်မှာသိသာစိတ်သက်သာရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုလည်းဝန်ကြီးမစ္စတာ Lutfi Elvan အောက်ပါဖြစ်ပါသည်, ငါမစ္စတာနိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒကျနော်တို့ခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Mersin တို့သည်ကြီးစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
မြေအောက်အလင်းရထားစနစ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှာအရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ "အများပြည်သူအမြင်တွင်ဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့သောအထငျမှားရှင်းလင်းလိုက်ပြီး Select ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ဖြစ်တယ်, အဆင်သင့်ငွေ, တင်ဒါခဲ့သည်။ အသစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပြုမည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ။ အခန်းထဲမှာလုံခြုံမီတာ၏မြို့နယ်မှ 350 ယူရိုသန်း? နောကျတကကျွမ်းကျင်မှု။ , ဒီပိုက်ဆံကိုရှာဒီတင်ဒါမှ, ထိုပြုပါ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုရွေးချယ်ပါအောက်ပါအတိုင်းသူ၏မိန့်ခွန်းကိုဆက်လက်:
"ကျနော်တို့အကြံပေးကုမ္ပဏီတခု၏ယခင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့ကြစီမံကိန်းတင်ဒါအသားရှိပါတယ်။ 8 200 တထောင်ပေါင်း KDV ဘီလီယံအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုက၏ပမာဏအတွက်စီမံကိန်း၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏ။ အတိတ်စီမံခန့်ခွဲမှုသန်းတထောင်ကြောင့် TL အဆိုပါ2200 ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ လစာအတွက်ကျန်ရှိနေသော6သန်းငါ၏အမြူနီစီပယ်အုပ်ချုပ်ရေး။ ဒါဝေးကိုဖန်ဆင်းဘာလဲ? ငါကြည့်ရှုရန်ဘာလုပ်ရမှန်းကိုရှင်းပြပြီးနောက်။ ကျနော်တို့လုပ်ငွေကိုပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းပြီးနောက်ကျနော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုအပ်မော်ဒယ်တည်ဆောက်-operate ။ ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များကို။ ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ချေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီဘတ်ဂျက်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းဝေးကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုမရှိဘဲဘဏ္ဍာရေးအာမခံချက်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမပေးသောကြောင့်အဘို့အသငျသညျတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ ငါယခင်အုပ်ချုပ်ရေး, ငါသည်အကြှနျုပျတို့ပွုသငျ့သညျအဘယျသို့ကိုဖျောပွခဲ့ပါဘယ်အရာကိုယနေ့ချိန်အထိဤနေရာတွင်မိပါတယ်။ စီမံကိန်းကိုနှုန်းရှည်ပုံပြင်တိုတောင်းစေ, ဒီ 350 ယူရိုသန်း။ ဤသည်ကိုလည်းထိပ်ပေါ်မှာ 50 သန်းယူရိုကျနော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့ဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်, ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြလိမ့်မည်ပေမည်။ အလုပ်အပြီးဒါ။ '' ဆာ, ငါတို့ယခုထိုသို့ပြုမှအသစ်သောစီမံခန့်ခွဲမှု4နှင့်တစ်နှစ်ခွဲနှစ်ကျဆင်း, အရာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆင်သင့်ငွေ, တင်ဒါခဲ့သည်။ အသစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပြုမည်။ '' ထိုကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ။ အခန်းထဲမှာလုံခြုံမီတာ၏မြို့နယ်မှ 350 ယူရိုသန်း? နောကျတကကျွမ်းကျင်မှု။ ဒီပိုက်ဆံကိုရှာပါကနှင်းအပ်ခဲ့ပါ, ကဖြစ်ပျက်ပါစေ။ "
Metrobus ဖြစ်လိမ့်မည်လျှော့ '' မွှေး '' ရှိပါတယ် 17 / 01 / 2013 အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus အတွက်အများဆုံးအသုံးများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသစ်တခုလျှောက်လွှာကစတင်ခဲ့သည်။ Metrobus ပါလိမ့်မယ်လျှော့ '' မွှေး '' ဖြစ်ကြသည်။ ခရီးသည်များ၏နေ့စဉ်အရေအတွက် Metrobus လိုင်းအတွက် 750 တထောင် applications များအနံ့ခံဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ ခရီးသည်ကိုအသုံးပြုခံရဖို့လာဗင်ဒါ, အဘိဓါန် Mandarin- နှင့်စန္ဒကူးရနံ့အဖြစ်ကျယ်ဝန်းပထမဦးဆုံးအလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့သွားလာနိုင်ရန်အတွက်ထုတ်ဆောင်သွားကြ၏။ ထိုအခါရာသီအညီကွဲပြားပါလိမ့်မယ်အရာများ၏အနံ့မျှကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စရာ 16 ဖြစ်လိမ့်မည်။ Metrobüsအတွက်စွန့်ပစ်လေမှုတ်ဆိပ်ကမ်းအနံ့ခရီးသည်နှောက်ယှက်ဖို့မဆေးများများတွင်အသုံးပြုရမည်။ အမျိုးအစားအနံ့လေအေးပေးစက်, ပြန့်ပွားအတွက်စွန့်ပစ်သည့်ယန္တရားအားဖြင့်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလေနှင့်အတူရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဗဟိုအပူပေးယူနစ်။ ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလူ့ကျန်းမာရေးကိုမဆိုအန္တရာယ်အနံ့ ...
ထို့နောက် YHT အစားတစ်ခုတည်းသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကို 15 / 10 / 2014 ထို့နောက်တစ်ခုတည်းသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအစား YHT: TR အစ္စတန်ဘူလ်သူတို့ကမြေအောက်လမ်းကြောင်းကပြောပါတယ်တဦးတည်းသောအသွားအလာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Elven မှထမြောက်အသစ်စီမံကိန်းများ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုကွောငျးဖျောပွ။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Lutfi Elvan, တူရကီရဲ့အသစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုပေး၏။ အထူးသဖြင့်, ထိုသူတို့အစ္စတန်ဘူလ် TR အသွားအလာ Elvan န်ကြီးမှထမြောက်အသစ်စီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးမှတ်ချက်ချသူကဤစီမံကိန်းမြေအောက်လမ်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ Elvan "အစ္စတန်ဘူလ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ Yeraltındanကျနော်တို့အသစ်တခုစီမံကိန်းကိုရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလမ်းမြေအောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်အချို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်သင့်သည်အရာ Elven ၏အပြောင်းအရွှေ့များအတွက်ပဏာမလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ် ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရွေးချယ်မှု, Verdi ဧဝံဂေလိတရား Mersin Metro မှ 02 / 07 / 2019 Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Vahap ရွေးချယ်မှု, Mersinlik ရှည်ချောင်းမြောင်းမြေအောက်ရထားမှ Mersin ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ သင်ကရှေးခယျြမှုကိုလက်ခံသောသူသည် Mersin Ferudin နေ့ခင်းဘက်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်အသင်း၏Diyarbakırဌာနခွဲသမ္မတ, သူတို့ Mersin စီမံကိန်းများကို၏မြို့အမှတ်တံဆိပ်ယူမယ်လို့အနာဂတျအတှကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များနှင့်သူတို့စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုပြောသည်။ သူတို့ပြုသမျှဖြေရှင်းနည်းများထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် Mersin ဦးစားပေးပြဿနာကို Select လုပ်ပါ, "ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့နယ်ပယ်များတွင်ရှိသည်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်စီမံကိန်းများနှင့်အတူ Mersin ကြီးမားသောစီမံကိန်းများနှင့်အတူလူလည်းတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ မြေအောက်သူတို့ထဲမှတစ်ဦး။ ငါတို့သည်ဤပြဿနာအပေါ်အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပထမသုံးလပတ် xnumx'n အကြောင်း, ဖြစ်နိုင်လျှင်ထိုခြေလှမ်းကိုယူချင်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းများ၏ခြေလှမ်းများယူကြပြီ" ...
Mersin နှင့်မြေအောက်ရထားစီမံကိန်း Mersin မြေအောက်ရထားမြေပုံ 04 / 09 / 2019 တူရကီ၏ရန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် (ပါလီမန်), နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏လက်ခံရရှိမှုအတွက်ခွင့်ပြုချက်ပေးသောပြောပါရန်စီမံကိန်းနှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Lutfi Elvan ရဲ့ Mersin မြေအောက်ရထား, Mersin နိုင်ငံသားများ၌ကြီးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ Mersin သည့်မြူနီစီပယ်ကတိုတောင်းသောကာလ၌ဆောက်လုပ်ထားခံရဖို့စတင်ခဲ့မည်ဖြစ်ပြီး Mersin မီထရိုလိုင်း4built-in ခံရဖို့တိုးတက်မှု '' ဖန်တီးတံ့သောမြို့တော်ရဲ့အသွားအလာပြဿနာများ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တစ်အစွန်းရောက်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာလိုင်းတစ်စွမ်းရည်နှင့်အတူတညျဆောကျပါလိမ့်မည်ဘူတာရုံ directory ကို / အချိန်နှင့် 1 ကီလိုမီတာနှင့်အတူတစ်ကြိမ် 15 262 1 THOUSAND ခရီးသည်စွမ်းရည် Mersin မြေအောက်ရထားလိုင်းရဲ့41080 20 ခရီးသည်တင်ကားများထားရှိရေးဦးမည် built ပါလိမ့်မည် ...
အဆိုပါက Metro ၏ Mersin ကုန်ကျစရိတ်
Metrobus ဖြစ်လိမ့်မည်လျှော့ '' မွှေး '' ရှိပါတယ်
ထို့နောက် YHT အစားတစ်ခုတည်းသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကို
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရွေးချယ်မှု, Verdi ဧဝံဂေလိတရား Mersin Metro မှ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပြုသောအမှု mesh ပတ္တူပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် (မူရင်းဖို့တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ်, Eskisehir နှင့် Konya) ဆွဲထားဖို့အလုပ်အရပျ
chairlift နှင့်အတူကျန်ရစ်ဒုတိယသမ္မတပျံဝဲ (ဗီဒီယို) ချို့ယွင်း
IBB သမ္မတအိမ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကနေထိုအခါက Metro စီမံကိန်း
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာ GCC အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလွန်နိမ့်သည်အပြီး ...
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာ skiff ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် 1,2ပြီးနောက်,3။ ။ နှင့်5။ နုဝေမျှ၏ရလဒ်များကို ...